त्यो कुरा सम्झें कि अहिले पनि म आकुल व्याकुल हुन्छु | मझेरी डट कम
त्यो कुरा सम्झें कि अहिले पनि म आकुल व्याकुल हुन्छु
HomSuvedi — Tue, 04/04/2017 - 13:30
कालिम्पोङमा थिएँ । बाहुनपुत्र भएकोले ब्राह्मणत्वले पेट पालिएको थियो । महिनाको दश भारुमा तल्लो ठाकुरबाडीको मन्दिरमा बिहान बेलुका धुपबाती गरिदिन्थें, अनि मध्ये बजारमा रहेको मङ्गल स्टोरका मालिक मारबाडीकोमा बिहान बेलुका शिवमहिम्न स्तोत्र र हनुमानचालिसा पाठ गरिदिने काम पनि थियो । यसबाट पनि महिनाको दस भारु नै पाइन्थ्यो । यसबाहेक औंसी पूर्णियाँ र एकादशीमा एक छाक खान पनि त्यहीं पाइन्थ्यो । अरु अरु कुरा केके थिए, सबै भनिन । माथि नै भनिसकें ब्राह्मणत्वले पालिएको थियो पेट । पढ्न बसिएको थियो । २०२७ सालतिरको कुरा हो, म बनारस गइसकेको थिइनँ ।
त्यही तल्लो ठाकुरबाडीको कुरा हो । थिए त्यस मन्दिरका मालिक गयाराम यी मारबाडी जातका पोद्दार थिए जस्तो लाग्छ । बडो पेट थियो । धोती लगाउँथे । बडो कडा मिजासका थिए । अरुअरुका अघि । तर पत्नीका अघि उनको हैकमको कुरै नगर्नु राम्रो । नेपाली ता सजिलै बोलिहाल्थे । त्यो मन्दिरका संस्थापकमध्येका यी एक थिए । वर्षवर्षदिनका लागि मन्दिरको आमदानी यो परिवारले आलोपालो गरेर लिँदो रहेछ । मलाई पछि मात्र थाहा भयो । चढेको सामग्री जसको पालो हो उसैको भागमा हुँदो रहेछ । जसको पालो पर्छ पुजारीलाई चिया खुवाउनु पर्ने पनि नियम रहेछ । मन्दिर भनेको यिनको खयोजीयोको ठाउँ पो रहेछ । यिनै गयारामको पालोमा मन्दिर परेको बेलामा म त्यहाँ रहेछु यसैले उनको मन्दिरसँगै जोडिएको घरमा बिहानको धुपबत्ती र आरती गरिसकेर म नित्य चिया खान जान्थें । यो कथा त्यही गयारामकोमा चिया खान जाँदा नित्यजसो देखिएको हो भोगिएको हो ।
मैले थाहा पाएँ, यिनै गयारामकी पहिलेकी पत्नी बितेकोले कान्छी पत्नी बिहा गरेका रहेछन् । गयारामकी जेठी पत्नीतिरकी एक जना छोरी मात्र रहिछिन् जसको नाम मीरा थियो । सायद मेरोभन्दा केही बढी उमेरकी थिइन् ती बिस तिरकी हुनु पर्छ । कान्छीतिरका पनि केही सन्तानहरू थिए ससानै । कान्छी पत्नी सायद पोलियोले होला एक खुट्टा खोच्याउँथिन् । स्वभावबाट बुझिन्थ्यो ती कान्छी सारै दुष्ट प्रकृतिकी थिइन् विशेष गरी मिराका हकमा । मीरालाई भुतालेको जगल्टाएको र चुटेको मैले पटक पटक देखेको थिएँ । उसलाई खाना दिएको मैले देखेको थिएँ । कान्छी आमाले कुट्ता उसले रुनुहुन्न थियो । आवाज निकालेर रोई भने झन् बढी कुटाइ खान्थी । चिर्पटले कुटेको देखेको छु । मिरा कुनै बेला मर्नु न बाँच्नुभएको जस्तो देखिन्थी ।
त्यसको बह पोख्ने ठाउँ कतै थिएन । त्यति बोलाचाली ता भएको थिएन तैपनि यदाकदा उसको दुःख देखेर मलाई रुन मन हुन्थ्यो भन्न सकिने कुरै भएन । अर्काको मामला । सानै उमेरको केटो छु । हेर्दा राम्रो न राम्रो कमेज सुरुवाल लगाएको । चट्ट परेको । यी धार्मिक स्तोत्रहरू सबै कण्ठ गरेको। रुद्री चण्डीहरू कण्ठ गरेको । यस्ता धार्मिक कुराहरू पढ्न कतै पुस्तकै खोल्नु नपर्ने ।
कसरी हो मलाई मीराले होङकार नाम राखेकी थिई । होमनाथ नामलाई होङकार कसरी भनी म के जानूँ ।
एक दिन बेलुका साँझ साँझको आरतिसकेर बाहिर निस्कन लाग्दैथिएँ अचानक मिरा अघि आई र भनी, “होङ्कार, म एक कुरा भन्छु ल ।”
मैले दिदी भन्नु उचित ठानें र भनें— “भन्नु न दिदी के भन्ने हो ?” यसअघि यसरी बोलाचाली खासै भएको थिएन ।
उसले यता उता बडो सतर्क भएर भनी—“तिमीले देखेकै छ, मलाई कस्तो परेको छ भन्ने कुरा । मलाई आमाले मार्ने भइन्, अब म कसरी यहाँ बस्नु ? म बाँचुँ कि मरुँ ? लु भन ।”
हे भगवान् म यो बेलामा के भनुँ ! मैले के भने अहिले मलाई केही थाहा छैन । त्यो बेलामा मैले के भन्नु पर्ने थियो, कसरी उसलाई सान्त्वना दिनु पर्थ्यो केही होस पलाइसकेको सायद थिएन होला मलाई । यसैले के भनें मलाई यसमा केही हेक्का नहुनु स्वाभाविक ठान्छु । त्यो बेलाको कुरा त्यहीं सकियो ।
मीराले साधारण कुटाइ ता खाएकै देखिरहें फेरि पनि । बाबुले छोरीलाई नकुट् भनेर चुँसम्म पनि बोलेको देखिएन सुनिएन, कान्छी सौतेनी आमाले आफ्नी छोरीलाई कुटेको र तातो पानी खन्याएको देखेर पथ्थर भएको बाबु सायद त्यही थियो होला । केही बोल्न खोज्दा फ्याङ्रीले सातो लिन्थी लोग्नेकै । अनि के बोलोस् । मलाई भने दृश्य सहीसक्नु र खपिसक्नु लाग्न छाड्यो चिया पनि के खाइरहनु तिनकोमा चिया खान पनि के जानु जस्तो लाग्न थाल्यो तापनि यो क्रम चलिरह्यो ।
केही दिन पछि फेरि उसले मलाई अलिक एकान्तमा पारेर भनी— “होङ्कार ?”
“हजुर दिदी ?” मैले भने ।
“मलाई लान सक्छौ ?”
म छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ । के भने के भने यसको उत्तर पनि मलाई अहिले थाहा भएन ।
“तिम्रो घर कहाँ हो मलाई थाहा छैन, तर जहाँ भए पनि मलाई लग । मलाई अहिल्यै लग । म बाँच्न चाहन्छु । मलाई बिहे गरेर राखे पनि हुन्छ, मलाई जे बनाऊ मलाई राजी छ । चाहे नोकर्नी नै भए पनि बनाएर मलाई राख । त्यस्तै भएर वा जे भएर पनि म बाँच्न चाहन्छु । देखेकै छौ कान्छी आमा फ्याङ्रीले मलाई मार्ने भई । बाबुको सातो खाइहाल्छे..........” उसको यही आशयको भनाइ थियो । शब्दहरू मात्र अहिले मेरा छन् । यी शब्दभित्रको परेको भाव सबै मीराको थियो ।
अनि मैले कता लानु । एक विद्यालयको छात्राबासमा बसेको भर्खको केटाले कता लानु त्यो केटीलाई ? उसमाथि न उमेर भएको छ । न दायित्वबोध छ न खान न पाल्न न केही न केही । सायद यस्तै केही बेटुङ्गाका कुरा गर्दै पन्सिएको हुनु पर्छ म ।
मीराको ढिपी केही दिनसम्म ममा रहिरह्यो ।
अनि अचानक एक दिन मीरा हराई ।
यसभन्दा उता आफैं पाठकहरू बुझ्नुहोला । म उताका कुरा लेख्न अप्ठेरो लाग्छ, आफैंलाई मुटुमा कसो कसो हुन्छ ।
अनि अन्तिममा पाठक ले बुझ्नु
कुरकुरे (not verified) — Fri, 09/22/2017 - 18:34
अनि अन्तिममा पाठक ले बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको उनले आत्महत्या गरिन्। होम सुवेदीज्यूले अहिले भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो?
जब हुन्छौ टाढा तिमी पोल्छ तिम्रो यादले
आसु पुछेर तिमीले मेरो भुल गर्यौ कि कतै ,,
गोपाल योञ्जन: राष्ट्रियताका लागि
आफैँलाई छल्दै व्यर्थै लुक्न चाहन्न
डोर्‍याउन सक्दैनौ भने
ए भमरा ! फूललाई मायाले घेरेर आऊ
लाल सागरको किनारबाट
यौन विकृति कि मानसिक असन्तुलन ?
देश, आमा र निद्रा
रामेकी स्वास्नी पोइल गइन्
धारिलो मौनता (छोटो कविता)
सम्झी सम्झी रुनु भन्दा
कसरी भनुँ नारीमुक्तिको जमाना छ?